Facebook မှာ တရက် ပျောက်သွားရင် | MoeMaKa Burmese News & Media
မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၂
4 Responses to Facebook မှာ တရက် ပျောက်သွားရင်
Mon on March 28, 2012 at 8:23 pm
Hiliriuos!!! Great, and it’s true. Thanks for an amusing truth….
jasmine on March 28, 2012 at 8:34 pm
u r suggested upon MYANMAR IS 100% right
NAI KYAW SEIN on March 30, 2012 at 1:30 pm
ဗုံးကွဲတာလဲမဟုတ် မြေငလျင်လှုပ်တာလည်းမဟုတ် အဖမ်းခံ၇တာလည်းမဟုတ်ဘူး ဒို.တောရွာမှာ အင်တာနက် လိုင်းမမိလို. ဧ၇ိယာပြင်ပေ၇ာက်နေလို.ဟေ့—–။
Mon on March 31, 2012 at 7:47 pm
You’re definitely right!!!